China Mechanical Inoratidzira Equipment Fekitori, Mechanical Inoratidzira Midziyo Mutengesi
Iyo ketani yekutakura yakashongedzerwa nefasidhi yekufashukira uye switch muganho. Gedhi rekufashukira rakaiswa pane iyo casing kudzivirira kukuvara kwemidziyo. Panhare yekuyamura kuputika iri pachikamu chemusoro chemuchina.
Hupfu chigayo michina TLSS dzakateerana tubular sikuruu conveyor inowanzo shandiswa yekuwandisa kudyisa muupfu chigayo uye chikafu chigayo.
Seyese yekugadzira zviyo kugadzira muchina, uyu wekuburitsa muchina wave uchishandiswa zvakanyanya muiyo yezviyo kugadzira indasitiri, magetsi chirimwa, madoko uye zvimwe zviitiko zvekuburitsa granule, hupfu, lumpish kana bhegi zvinhu, senge zviyo, marasha, yangu, zvichingodaro.
Bhandi rinotakura rinoshandiswa zvakanyanya muzviyo, marasha, mugodhi, fekitori yemagetsi magetsi, zviteshi uye mimwe minda.
Hupfu chigayo muchina Chinyorwa uye pneumatic yemasiraidhi gedhi rinoshandiswa zvakanyanya muzviyo nemafuta chirimwa, chikafu kugadzira chirimwa, simende chirimwa, uye kemikari chirimwa.